I reactance exhasa kuya wesifunda AC
Ukumelana e circuit kagesi kuyinto ezimbili zama - asebenzayo futhi esisheshayo. resistors Active emelelwa, esikhipha, Ukushisa ohlobo nokunye. Ngamanye amazwi, zonke izinto lapho ukugeleza lwamanje ngqo wenza umsebenzi ewusizo noma ecaleni ekhethekile, ukukhiqiza wayefisa Ukushisa umqhubi. Ngakwelinye ihlangothi, jet --Gnostic. It libhekisela reactance capacitive futhi exhasa. Izakhi wesifunda kokuba reactance, ukudlula kagesi zenzeka ahlukahlukene Lesisemkhatsini energy conversion. A capacitor (capacitance) aqoqana icala, bese ithumela yona loop. Esinye isibonelo - the reactance exhasa kwekhoyili, lapho ingxenye energy kagesi is ibe kazibuthe.
Empeleni, igama elithi "ubumsulwa" noma reactances asebenzayo cha. Njalo ingxenye okuphambene likhona. Ngokwesibonelo, lapho kubalwa izintambo isikhathi eside-ibanga izintambo zikagesi, acabangele hhayi kuphela ekumelaneni kodwa futhi capacitive. Futhi ngokucabangela reactance exhasa, kumelwe kukhunjulwe ukuthi kokubili babashayeli kanye kwamandla benza izinguquko ezithile endleleni esenza izibalo.
Ngokuzimisela ukumelana Imininingwane wesabelo wesifunda, kubalulekile ukuba Songa izingxenye asebenzayo futhi esisheshayo. Ngaphezu kwalokho, ukuze uthole isamba ngqo ngendlela evamile imisebenzi zezibalo kungenzeki, ngakho sebenzisa weJiyomethri (vector) indlela ukwakha. Wakha unxantathu kwesokudla kabani cathetus ezimbili kukhona impedance asebenzayo futhi exhasa, kanye hypotenuse - egcwele. Ubude kumasegmenti elihambisana anamuhla.
Cabanga reactance exhasa kuya wesifunda AC. Mela wesifunda elula ehlanganisa umthombo wamandla (EMF, E), a Resistor (ingxenye resistive, R) kanye lekhoyili (inductance, L). Kusukela reactance exhasa kungenxa EMF self-eyenga (E B) e ematfuba kwekhoyili, kusobala ukuthi kwandisa ne inductance wesifunda kanye nokwanda ukubaluleka wamanje egeleza ngokusebenzisa wesifunda.
umthetho Ohm salokhu wesifunda libukeka:
E + E B = mina R.
Ngemva ekunqumeni isikhathi esuselwe wamanje (I PR) ukubala self-lokungeniswa:
E si = -L * mina ave.
"-" uphawu kule ndaba ibonisa ukuthi umphumela E si aqondiswe ekushintsheni Inani lamanje. Lenz umthetho uthi uma kukhona ushintsho lwamanje EMF self-eyenga. Njengoba izinguquko ezinjalo ezifundeni AC kukhona yemvelo (futhi njalo), E B yakha ukumelana eningi noma ukumelana nakho kuyiqiniso. Endabeni ka umthombo amandla zamanje ngqo , lobu buhlobo onganelisekile nalapho ngomzamo ukuxhuma usebenzisa ikhoyili enjani (inductance) esifundeni anjalo isekhethi iphutha zakudala
Ukuze unqobe lo E B ugesi kumele ukukhiqiza umehluko okunamandla okutholakele ikhoyili ukuthi kwanele, okungenani ku E si ukumelana isinxephezelo. It kulandela:
U = -E ikati si.
Ngamanye amazwi, lo voltage yonkana inductor kuyinto anda elilingana nebutho electromotive self-lokungeniswa.
Njengoba nge okwandisa samanje wesifunda kwandisa amandla kazibuthe bazabela edonsa ensimini eddy okubangela ukukhula inductance sokufudumeza, ngubani ongamtshela ukuthi kukhona shift isigaba phakathi voltage zamanje. Yingakho ngesinye isici: ngoba i-self-lokungeniswa EMF kuvimbela noma yiluphi ushintsho lwamanje, uma kwandisa (isikhathi ikota wokuqala sinusoid e) esiphikisayo ensimini ekhiqizwa, kodwa ekwindla (ihlandla lesibili) Kunalokho - wamanje eyenga kuyinto codirectional sizindza. Okungukuthi, uma postulate khona i ekahle amandla umthombo ngaphandle ukumelana kwangaphakathi futhi inductance ngaphandle ingxenye esebenzayo, vibration amandla "umthombo - ikhoyili" kungavela unomphela.
Bureaucracy - kuyinto ...
ZeJiyomethri, noma kanjani ukuqala geometry
Sharks e Sea: Iqiniso noma Amanga?
Ulwazi lwesayensi kanye nezici zayo
Umqulu inyama nengulube - isidlo kuthebula iholide kanye dinner umndeni
Jake T. Austin - "umlumbi" of Hollywood
"AmaViking Ihhotela". Turkey. incazelo
Relaxing massage - indlela ukuqeda ukucindezeleka
Kuhle eBook esikhanyayo